KEDU ESI AGBA ỌKỤ SITE NA ISO, MDF / MDS, NRG? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Ezi ehihie Eleghi anya, onye ọ bụla n'ime anyị na-ebudata ihe oyiyi ISO na ndị ọzọ na egwuregwu dị iche iche, mmemme, akwụkwọ, na ihe ọzọ. Mgbe ụfọdụ, anyị na-eme onwe anyị, na mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịdekọ na ezigbo mgbasa ozi - CD ma ọ bụ DVD diski.
Ọtụtụ mgbe, ịnwere ike ịkụ ọkụ disk site na ihe oyiyi mgbe ị na-aga igwu egwu ya ma chekwaa ozi na mgbasa ozi CD / DVD ọzọ (ma ọ bụrụ na njehie ma ọ bụ kọmputa na OS malfunctions) emerụ, ma ọ bụ na ịchọrọ disk iji wụnye Windows.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe niile dị n'isiokwu a ga-agbakwunyere dabere n'eziokwu na ị nwere ihe oyiyi na data ị chọrọ ...
1. Kpoo disiki site na MDF / MDS na nke ISO
Iji dee ihe oyiyi ndị a, e nwere ọtụtụ ihe omume iri na abụọ. Tụlee otu n'ime ihe kachasị ewu ewu maka azụmahịa a - usoro ihe omume mmanya na-aba n'anya 120%, nke ọma, gbakwunyere na anyị ga-egosi n'ụzọ zuru ezu na screenshots otú edekọ ihe oyiyi ahụ.
Site n'ụzọ, ekele maka mmemme a, ị nwere ike ọ bụghị naanị na ịdekọ ihe oyiyi, mana ịmepụta ha, yana imulate. Emulation n'ozuzu ya bụ ihe kachasị mma na mmemme a: ị ga - enwe ike iche iche windo n'ime usoro gị nke nwere ike imeghe ihe oyiyi ọ bụla!
Ma, ka anyi gaa n'ihu idekọ ...
1. Gbaa usoro ihe omume ma meghe windo. Anyị kwesịrị ịhọrọ nhọrọ "Burn CD / DVD site na ihe oyiyi".
2. Ọzọ, dee foto ahụ na ozi ị chọrọ. Site n'ụzọ, usoro ihe a na-akwado ihe oyiyi kachasị ewu ewu nke ị nwere ike ịhụ na net! Iji họrọ ihe oyiyi - pịa bọtịnụ "Gaagharịa".
3. N'ihe atụ m, m ga-ahọrọ ụdị egwuregwu ọ bụla e dekọrọ na usoro ISO.
4. Dịrị nke ikpeazụ.
Ọ bụrụ na arụnyere ọtụtụ ngwaọrụ ndekọ na kọmputa gị, ịkwesịrị ịhọrọ nke dị mkpa. Dị ka usoro, usoro ihe omume na igwe ahụ na-ahọrọ ndekọ ziri ezi. Mgbe ịpịpị bọtịnụ "Malite," naanị ị ga-echere ruo mgbe edere foto ahụ na diski.
Ná nkezi, ọrụ a dị site na 4-5 ruo 10 nkeji. (Ọdịsọ nke ndekọ ahụ dabere na ụdị diski, CD-Rom na ọsọ ị họọrọ).
2. Dee NRG oyiyi
Ụdị ihe oyiyi a na-eji usoro ihe omume Nero. Ya mere, ndekọ nke faịlụ dị otú ahụ dị mma ma mepụta otu usoro a.
A na-achọtakarị ihe oyiyi ndị a na netwọk dịka ihe karịrị nke ISO ma ọ bụ MDS.
1. Mbụ, na-agba ọsọ Nero Express (nke a bụ obere usoro nke dị mfe maka ndekọ ngwa ngwa). Họrọ nhọrọ iji dekọọ ihe oyiyi ahụ (na nseta ihuenyo dị nnọọ ala). Na-esote, dee ọnọdụ nke faịlụ oyiyi na diski.
2. Anyị nwere ike na-ahọrọ onye na-edekọ ihe, nke ga-edekọ faịlụ ma pịa bọtịnụ iji malite ndekọ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na n'oge ndekọ, otu njehie na - apụta ma ọ bụrụ na ọ bụ diski nwere ike iwepụ, mgbe ahụ ọ ga - aka njọ. Iji belata ihe ize ndụ nke njehie - dee ihe oyiyi na ọsọ kacha nta. Karịsịa ndụmọdụ a na-emetụta mgbe ị na-edegharị na foto disk na Windows usoro.
E mechara isiokwu a. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ihe oyiyi ISO, ana m akwado ka ị mara ihe omume dị otú ahụ dị ka ULTRA ISO. Ọ na-enye gị ohere ịdekọ na dezie ụdị ihe oyiyi ahụ, mepụta ha, na n'ozuzu ya, ma eleghị anya, enweghi m aghọgbu na site na arụmọrụ, ọ ga-emetụta ihe omume ọ bụla a kpọsara na nke a!